Linux 5.11: pamwe nekuvandudzwa kunodiwa nevatambi | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.11: nekuvandudzwa kunodiwa nevatambi
Kana iwe uchida mutambo wemitambo uye iwe uri gamer muridzi wehardware kubva kune anozivikanwa ASUS ROG akateedzana, ipapo kuvandudzwa kwakabatanidzwa mune Linux kernel 5.11 uchavafarira, sezvo, pakati pezvimwe zvinhu, inovandudza rutsigiro rwemhando iyi yemidziyo, senge rutsigiro rwuri nani kune avo keyboards.
Makore mashoma apfuura, vashoma vangati mumwe aigona kutaura nezviuru zvemazita ezvinzvimbo zve videogames yeiyo GNU / Linux chikuva, kana kudiwa kwekusanganisira iyi mhando yevatyairi uye kugadzirisa kwemitambo mune kernel. Asi chokwadi ndechekuti nzvimbo yevaraidzo yakachinja zvakanyanya kune iyo penguin chikuva, uye zviri kutotyisa kutarisa kumashure kuti kufambira mberi kwakawanda kwakaitwa sei.
MuLinux 5.11, iyo nharaunda yakashanda nesimba kuwedzera izvi zvinowedzera kutsigira ASUS michina, se ASUS haina kuzviita iri yega. Mushambadzi Luke Jones ndiye wekutenda nekuda kweizvi, pamusoro pezvese zvaari kuita nemapurojekiti aanawo paGitLab ekuti zvese izvi Hardware zvishande zvirinani.
Chikwata chakawedzera rutsigiro rwe ASUS N-Kiyi kuLinux 5.11. Ichi chigamba chinofanirwa kushandira kuwanda kwemamodeli akasiyana, sezvo ivo vachiita kunge vari kushandisa imwechete productID (0x1866) kune akawanda maUSUS mamodheru, saka yakazara rutsigiro yakafukidzwa.
Nayo unogona kuva nayo kiyi yekuwana nzira pfupi Fn + _, chengetedza kupenya kwekhibhodi RGB backlight, nezvimwe. Zvakare kushanda pamagadzirirwo ehurongwa system yemamwe mabhuku ekunyorera akadai seG14 uye G15 akateedzana. Zvakare GX502 yaizove negadziriro inoreva kurira kwema combo jacks. Kudiki kuvandudzwa kunoita kuti vashandisi veASUS vawedzere kugadzikana uye vadzivise zvimwe zvino netsa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » Linux 5.11: nekuvandudzwa kunodiwa nevatambi
Mimwe yakavhurwa sosi maturusi ekugadzira akadzika masayiti
NixOS 20.09 inosvika neyakagadziridzwa yemapakeji, nharaunda uye nezvimwe